‘Indonezia, na ahoana na ahoana’: Ketraka amin’ny fomba fiady amin’ny COVID-19 ireo miasa eny amin’ny lohalaharana · Global Voices teny Malagasy
Mety hahatonga ny firenena ho foiben'ny aretina vaovao ve ny paikadin'ny governemanta?
Voadika ny 03 Jona 2020 6:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Italiano, English
Tsy ny maherifo rehetra no mitafy sarotro avy amin'i Komik Faktap. Nahazoana alalana
Nironana tao Indonezia ny farangoteny Twitter (hashtag) #IndonesiaTerserah (Indonezia na ahoana na ahoana) rehefa naneho ny loniloniny ireo mpiasan'ny fikarakarana ny fahasalamana tamin'ny famahana ireo fameperana sy ny tsy fahavitàn'ny maro nanaja ny arofenitry ny tsy fifampikasohana anaty fiarahamonina.
Nampiroboroboin'i Tirta Mandira Hudhi, dokotera sady mpandresy lahatra ny maro ao amin'ny media sosialy, ny farangoteny rehefa naneho ny hetsi-pony tamin'ny fahitana ireo vahoaka be tao amin'ny seranam-piaramanidina. Nandray sy nampiasa ilay farangoteny ny mpiseraTwitter ho fanehoana firaisankina amin'ireo mpiasan'ny fikarakarana fahasalamana.
Tirta Mandira Hudhi, dokotera sady mpisera media sosialy manana ny lazany, nanangana marika milaza hoe “Indonezia??? Na ahoana na ahoana!!! Ataovy izay tadiavinao.”
Nanazava avy eo ireo matihanina amin'ny fahasalamana taty aoriana fa tsy manam-pikasana ny hilavo lefona ry zareo, mbola hanohy amin'ny fikarakarana ny vahoaka ry zareo na dia eo aza ny tsy fanarahan'ny olona sasany ny fitarihan-dalana amin'ny fahasalamana.
Ohatra ratsy malaza amin'ity fanitsakitsahana ny fitarihan-dalana ity ny famoriam-bahoaka hanao veloma farany ny sampan'ny McDonald iray ao Jakarta, renivohi-pirenena, izay hikatona tanteraka.
Mitolona i Indonezia hifehy ny fielezan'ny COVID-19. Araka ny lahatahirin'ny governemanta tamin'ny fotoana nanoratana ny teny anglisy, mahatratra 24.538 ny tranga voamarina ho tratran'ny COVID-19 ary 1.496 no matiny.
Faritany 39 ao amin'io firenena io no ahitana trangan'ny COVID-19.
Nilaza ny Fikambanan'ny Mpikarakara ny Ankizy Indoneziana fa ao no ahitana ny isan'ny kilonga matin'ny COVID-19 avo indrindra ao Azia.
Tamin'ny 10 avrily ihany vao napetraky ny governemanta Indoneziana ny famerana ny fivezivezena, izay noheverin'ny mpanara-baovao ho tara loatra hisorohana ny fielezan'ny viriosy. Efa nilaza talohan'izany ny Filoha Joko Widodo fa hanimba ny toekarena sy hamindra toerana mpiasa tsy ao anatin'ny ara-dalàna an-tapitrisany ny fihibohana manontolo.
Misy ny ahiahy fa mitady hampihatra ny herd immunity na ny famelana malalaka ny olona hifangaroharo ny governemanta indoneziana, na dia efa nisy aza ny fandavana avy amin'ny mpiasam-panjakana ambony iray ao amin'ny governemanta.
Na eo aza izany, maro ireo manampahazaina no nitsikera ny fomba fiasan'ny governemanta. Anisan'izany ny Biostatisiana, ny Dr. Pandu Priono:
Na ahoana na ahoana, angamba tsy misy ny tena faniriana hifehy ny areti-mandringana eto Indonezia. Ataovy ao an-doha fa manana adidy ny governemanta indoneziana hiaro ny firenena sy ny tanindrazana, sns. mifanaraka amin'ny Lalampanorenana.
Mandritra izany fotoana izany, nampitandrina ny siantifika biomedikaly, ny Dr. Indra Kusuma fa hiteraka zavadoza ny fampiharana ny ‘famelana malalaka ny olona hifangaro’ (herd immunity) tsy misy vakisiny.
Avelao averiko: fandripaham-bahoaka izany ‘famelana malalaka ny olona’ tsy misy vakisiny atao amin'ny daholobe izany.
Ny fahataran'ny fametrahana fepetra isorohana ny COVID-19 avy amin'ny governemanta foibe no mahatonga ireo fiadidiam-paritra isankarazany manerana ny vondronosy mitady karazam-bahaolana azon-dry zareo ampiharina amin'ny fari-piadidian-dry zareo.
Vao maika miteraka tsindry bebe kokoa ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny lohalaharana ny tsy fisian'ny fifandrindràna eo amin'ny governemanta foibe sy ireo fiadidiana isa-paritra, maro amin-dry zareo no miasa amin'ny toerana mampididoza nefa tsy mifanaraka amin'izany kosa ny tambin-karama.
“Nivarotra ny ainay izahay, saingy kely noho ny tokony ho izy ny aloa aminay. Mpanampy mpitsabo an-jatony no miatrika fampihenana/fanapahana karama ary nohazonina ny karaman'ny volana faha-13n-dry zareo. Mitovitovy amin'ireo hafa miasa amin'ny fifanarahana arakasa.
Nandany vola be ny governemanta indoneziana hividianana fitsokarivotra, namboarina tao an-oerana. Efa natsangana ihany koa ny tranonkala manokana entina hanaraha-maso ny antontanisan'ny COVID-19 sy ny fielezan'ny aretina.
Saingy maro ireo nanontany tena raha kely loatra, tara loatra ireny ezaka ireny.
Manampahaizana manokana iray momba ny fahasalamam-bahoaka voatsonga tao amin'ny New York Times (NYT) no nilaza fa efa nitranga ny fifamindrana eo amin'ny daholobe. Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, mety hisonga [avo] ny fielezan'aretina noho ny Mudik.
Ny Mudik dia fombandrazana fodiana fanao isa-taona ahitana ireo mponin'ny tanandehibe miaraka amin'ny fianakaviambe any an-tanàna ambanivohitra miara-mankalaza ny Eid.
Tsy mety miala amin'izany fahazarana izany, maro ireo nody an-taindrazana hankalaza ny Eid miaraka amin'ny fianakaviany, tsy miraharaha izay mety hampidi-doza amin'ny fanaovana izany.
Mandritra izany fotoana izany ny Filoha Jokowi nanambara tao amin'ny Instagram fa hampiely ny miaramila ny governemantany hampihatra ny arofenitra amin'ny fiarovana ara-pahasalamana eny ankalamanjana raha vao mihamiboraka ireo baiko fampanarahana ny fanokana-monina.